माओवादीले बादललाई कारबाही गरेको पत्र किन बुझाएन ?
माओवादीले बादललाई कारबाही गरेको पत्र किन बुझाएन ? ‘एक–दुई दिनमा बुझाउँछौँ’
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी छाडेका सांसदहरुलाई मंगलबार कारबाही गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा मन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभाका चार सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयलाई गरायो ।
माओवादीले मन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहले पार्टी त्यागेको जानकारी गराएको हो । राष्ट्रियसभाका सांसद रामबहादुर थापा ‘बादल’ ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छन् । माओवादीले बादललाई कारबाही गरेको पत्र भने बुझाएको छैन । उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको र एक–दुई दिनभित्रै संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए ।
“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई छुट्टै पत्र बुझाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई कारबाही गरेको पत्रचाहिँ बुझाइयो । प्रतिनिधिसभा चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभा चलेको पनि छैन । सदन चलेका बेलामा अध्यक्षले सदनमा सुनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
संसद् नचलेको अवस्थामा पार्टी परित्याग गरेको जानकारी सचिवालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । “सोही कारण पत्र बुझाउन सदन चल्नुपर्छ भन्ने छैन । पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । एक–दुई दिनमा बुझाउँछौँ,” गुरुङले भने ।
हाल राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलेको छैन भने अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि देशबाहिर छन् । त्यसकारण पत्र नबुझाइएको राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेशकी सांसद देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्ष र विपक्षमा भएको मतदानमा झुक्किएको... १० मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी नफुटाउने निष्कर्ष निकालेको... २९ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन्... ५४ मिनेट पहिले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेको आरोप... १ घण्टा पहिले